भुसालको अग्निपरीषा -
November 22, 2019 gautam buddha sandesh	0 Comments
भैरहवा, ६ मंसिर ।
रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद घनश्याम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनले बिहीबार सपथ ग्रहणगरी कार्यभारसमेत सम्हालेका छन् । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का स्थायी सदस्य समेत रहेका भुसालले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । नेकपाभित्र आदर्शवादी नेताको छवि बनाएका भुसाललाई मन्त्री बनाएकोमा धेरैले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । भुसाललाई चक्रपाणि खनालको ठाउँमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ल्याइएको हो ।
यसअघि झलनाथ खनालको कार्यकालमा उनी बिनाविभागीय मन्त्री बनेका थिए । यसपालि भने उनले उदाहरणीय काम गरेर देखाउन सक्ने मन्त्रालय पाएका छन् । वामपन्थी आन्दोलनका प्रखर वक्ता र माक्र्सवादी चिन्तकका रुपमा चिनिएका भुसाल सत्ता, शक्ति र पैसाले राजनीति चल्नु हुँदैन भन्ने धारणा राख्छन् । उनले राजनीति सिद्धान्तका आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । धेरैले भुसाल जस्तो व्यक्तिलाई कृषि मन्त्रालय ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनको राजनीतिक ‘हाइट’अनुसारको मन्त्रालय नपाएको भन्दै धेरैले असन्तुष्टि पोखेका छन् । कृषि मन्त्रालयको हाइट कति हो भन्ने कुरा न सरकारले बुझेको छ न त नागरिकले नै ।
मन्त्रालय मात्रै होइन, कृषि पेशालाई उपेक्षा गरिँदै आएकोमा भुसालले यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु सुखद कुरा हो । सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा दिएको छ । तर विदेशबाट खाद्यान्न आयात गरेर कसरी हुन्छ समृद्ध नेपाल ? देश समृद्ध बन्नलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनु अति आवश्यक छ । एक जना किसानको छोरा किसान बन्न नचाहने अवस्थामा कृषिको व्यवसायीकरण कसरी हुन्छ ? अहिले पनि भारतलगायतका देशबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
हामी बंगलादेशकै उदाहरण लिन सक्छौँ । बंगलादेशले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदै आर्थिक वृद्धि गरेको छ । विश्व बैंकका अनुसार बंगलादेशको ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो हुनुमा कृृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ । सन् २००५ देखि सन् २०१० सम्ममा बंगलादेशको गरिबी निवारणमा कृषि क्षेत्रको ९० प्रतिशत योगदान थियो । गएका चार दशकमा बंगलादेशले विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिका बाबजुद खाद्य सुरक्षामा उल्लेख्य सफलता हात पारेको छ । १९७२ मा बंगलादेशले ९.८ मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन गरेको थियो भने सन् २०१४ मा ३४.४ मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन गरेको थियो । सन् १९७० को दशकमा भोकमरीको चपेटामा परेको बंगलादेश अहिले विश्वकै ‘फूड बास्केट’ का रुपमा चिनिन थालेको छ । त्यतिबेला बंगलादेशमा भोकमरीबाट झण्डै १५ लाखको ज्यान गएको थियो ।
सरकारले अघि सारेको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना’ कार्यक्रममा कृषिको उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार गर्ने बताइएको छ । सरकारले समयसीमा तोकेरै गहुँ, तरकारी, धान, मकै, माछा, केरा, मेवा, लिचीलगायतका कृषि उपजको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने बताएको छ । २० वर्षे कृषि विकास रणनीति ल्याएर सरकारले नेपालको कृषि क्रान्तिमा नयाँ आयाम थपेको दाबी गरेको छ । यो रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने सरकारले विश्वास गरेको छ ।
नेपालले पनि खाद्यान्नमा रहेको परनिर्भरता हटाउँदै खाद्य सुरक्षामा आफूलाई बलियो बनाउन सके मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । अहिले पनि वार्षिक रुपमा झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात हुँदै आएको अवस्थामा कृषि मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका भुसाललाई चुनौतीसँगै अवसर पनि छन् । उनले अब मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै उनको अग्निपरीक्षा समेत सुरु भएको छ । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका भुसालले पनि बेला–बेलामा कृषि क्षेत्रको विकासबिना देशको समृद्धि सम्भव नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
जुन देशले कृषिमा विकास गर्दैन, त्यसले विकासमा पाइला सार्दैन भन्ने उनको पनि बुझाइ छ । सरकारले कृषिले क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरे केही वर्षमा काम गर्नकै लागि विदेश जान पर्ने बाध्यता हट्ने पनि उनी बताउँछन् । नेपालमा कृषि क्षेत्र व्यावसायीकरण नभएको र खाद्यान्नमा परनिर्भरता भएको अवस्थामा क्रान्तिको एक सिद्धान्तकारको हैसियतले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने चुनौती भुसालमाथि छ । भुसाल मन्त्री भएपछि उनको गृहजिल्ला रुपन्देही र निर्वाचन क्षेत्रमा खुशी छाएको छ । कृषि क्षेत्रले आमूल परिवर्तन गर्ने अपेक्षासहित धेरैले उनलाई सामाजिक संजालमार्फत् बधाई दिइरहेका छन् ।
भुसालको राजनीतिक यात्रा
२०१८ साल भदौ २६ गते स्याङ्जाको पिडीखोलामा भुसालको जन्म भएको हो । जगन्नाथ भुषाल र झविसरा भुसाालका छोरा घनश्यामका १ छोरा र १ छोरी छन् । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका भुसाललले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०७० सालको चुनावमा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ बाट पराजित भएका थिए । त्यतिबेला उनी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार बालकृष्ण खाणसँग मात्रै ८८ मतले पराजित भएका थिए । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भने उनले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा राप्रपाका प्रभावशाली नेता दीपक बोहोरालाई हराउँदै जित निकाले ।
बोहोरालाई उनले झण्डै ५ हजार मतले हराएका हुन् । २०३४ सालदेखि राजनीतिमा लागेका भुसालले २०३७ देखि २०४६ सालसम्म पटक–पटक गरेर झण्डै तीन वर्ष जेल जीवन विताएका छन् । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसम्बन्धी छोटो समय मन्त्री पनि बनेका थिए । २०५१ सालका मध्यावधि चुनावमा निर्वाचित धनपति उपाध्यायको निधनपछि भएको उपचुनावमा भुसाल रुपन्देहीबाट विजयी भएका थिए । उनी नेकपा एमालेमा युवा विचारकका रुपमा परिचित थिए । उनले ‘नेपालको अर्थराजनीति’ का साथै ‘आजको माक्र्सवाद र नेपाली क्रान्ति’ शीर्षकको पुस्तक पनि लेखेका छन् । उनी नेपाली राजनीतिक नेता बौद्धिक नेता मानिन्छन् ।
← न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता
हरेक पूर्वाधारमा अग्रणी जिल्ला →
स्थायी सरकारको लागि बाम गठबन्धनको बहुमत आवश्यक : भुषाल
November 7, 2017 gautam buddha sandesh	0
बाम गठबन्धन जित नजिक : बराल
November 11, 2017 gautam buddha sandesh	0
होलीमा सद्भाव कि आतंक ?
March 1, 2018 gautam buddha sandesh	0